အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ အပူစုံစမ်းစစ်ဆေး? အကောင်းဆုံး အပူစုံစမ်းစစ်ဆေး အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
ငါတို့မှအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ခမ်းနားထည်ဝါသောအသုံးအစုအဝေး Available အပူစုံစမ်းစစ်ဆေး ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီအခြေခံကျသောပစ္စည်းမှလုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ Assisted, Soar Technology Co., Ltd ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးမှာဒီဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်းပုံစံကဒီကျနော်တို့ standard နှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများနှစ်ခုလုံးတွင်အဆိုပါတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်အထွဋ်အထိပ်တန်းပစ္စည်းနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်မားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။
ရီနီယမ်-tungsten ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့် semiconductor တွင်အသုံးပြုသည်,အယ်လ်အီးဒီ,LCD နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ,နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးကတ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်,စုံစမ်းစစ်ဆေးဘူတာ,chip ကိုစမ်းသပ်ခြင်း,wafer စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် LED chip ကိုစမ်းသပ်ခြင်း.
ရီနီယမ်-tungsten ဆေးထိုးအပ်များသည်မာကျောမှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု.ရီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစမ်းသပ်ကဒ်ပြားများ-tungsten ဆေးထိုးအပ်များသည်ကြာရှည်စွာအသုံးဝင်ပါသည်-သက်တမ်းစမ်းသပ်ခြင်း,ဒါပေမယ့်ရီနီယမ်၏ကုန်ကျစရိတ်-tungsten ကအပ်များက tungsten needles ထက်နိမ့်ပါတယ်.ရီနီယမ်၏ကုန်ကျစရိတ်-အဖြိုက်နက်သည်အခြားအဖြိုက်နက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်. .
အဆိုပါပစ္စည်း-rhenium နှင့်ဆက်စပ်သောဂုဏ်သတ္တိများ-tungsten အပ်များဟာ tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်ဆင်တူသည်.၎င်း၏ elasticity နှင့် conductivity သည် tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်တူညီသည်,နှင့်၎င်း၏အဆက်အသွယ်ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေး၏သက်တမ်းထက်သာ။ ကောင်း၏.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/heating-probe.html
အကောင်းဆုံး အပူစုံစမ်းစစ်ဆေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အပူစုံစမ်းစစ်ဆေး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အပူစုံစမ်းစစ်ဆေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan